OPPO ရဲ့ Digital Car Key ကို Bull & Segway-Ninebot လျှပ်စစ် စက်ဘီး အတွက် - Pandaily
OPPO ရဲ့ Digital Car Key ကို Bull & Segway-Ninebot လျှပ်စစ် စက်ဘီး အတွက်
Jun 20, 2022, 18:20ညနေ 2022/06/20 23:39:44 Pandaily
တရုတ် စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီ OPPO က တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကား သော့ ဝန်ဆောင်မှုကို အဆင့်မြှင့်တင် ခဲ့ပြီး ယခုအခါ Segway-Ninebot လျှပ်စစ် စက်ဘီး များနှင့် အပြည့်အဝ သဟဇာတဖြစ် သည်.
OPPO Reno 8 စမတ်ဖုန်း စီးရီး နဲ့ အခြား မော်ဒယ် များစွာ အပြင် OPPO နာရီ တွေမှာလည်း Segway-Ninebot လျှပ်စစ် စက်ဘီး နဲ့အတူ Keyless Unlock အတွေ့အကြုံ ရရှိ နိုင်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ဆိုပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် OPPO ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် သော့ သည် Niu Technology မှ MQi2s စီးရီး မော်တော်ဆိုင်ကယ် များကို သော့ဖွင့် ရန် စတင် ထောက်ပံ့ ခဲ့သည်။
OPPO ရဲ႕ Digital Car Key Feature ကေတာ့ Tesla ‘s Model3နဲ႔ Model Y, Xiaopeng Car စတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္ကုန္ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားမွာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:OPPO နှင့် Tesla China တို့သည် Digital Car Key Adaptation ကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
သက်ဆိုင်ရာ OPPO မော်ဒယ် ပိုင်ရှင် တွေအနေနဲ့ ဖုန်း ထဲက “ပိုက် ဆံအိတ်” အပလီ ကေး ရှင်း မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကား သော ့ကို အမြန် ထည့် လို့ ရပါတယ်။ သတ်မှတ်ထား ပြီ ဆိုတာနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ OPPO ဖုန်း နဲ့ ကားနဲ့ နီး ရင် အလိုအလျောက် လော့ ခ် ဖြည် မှာ ဖြစ်သလို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကား သော့ မလိုဘဲ ကား ထဲက ထွက် ရင် အလိုအလျောက် လော့ ခ် ဖြည် မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
OPPO ၏ Digital Car Key သည် Find N Model, Find X5 Series, Find X3 Series, Reno8 Series, Reno7 Series, Reno6 Series, Reno5 Series, OPPO K9 နှင့် ColorOS 11.2 နှင့်အထက် အပါအဝင် အခြား ဖုန်း များအတွက် သင့်တော်သည်။
Digital Car Key Function သည် OPPO Smart Travel Program ၏အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ OPPO Smart Travel Program သည် OPPO မှ မိတ်ဆက် ပေးသော Cross-Terminal နှင့် Full-Scene System Travel Solutions ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ ၈၀ ကျော်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကား ထုတ်လုပ် သူများ၊ ဘီး နှစ် ဘီး လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ် သူများ၊ ပထမအဆင့် ထုတ်လုပ် သူများနှင့် ခရီးသွား ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူ များ။ ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္ အကုန္ မွာ OPPO Smart Travel ကား အစီးေရ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ေစ်းကြက္ ထဲ ေရာက္ လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္။
စက်ပစ္စည်း ရူပါရုံ ချစ်ပ် ကုမ္ပဏီ AlpsenTek က ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ယွမ်သန်း ၂၀၀ နီးပါး (ဒေါ်လာ ၃၀. ၁ သန်း) တန်ဖိုးရှိ ရန်ပုံငွေ A ကို ပြီးစီး ခဲ့ ပြီဟု တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။